अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता नहुँदा समस्या- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता नहुँदा समस्या
नोबेल र विराट अस्पतालका सबै बेड भरिए
वैशाख २२, २०७८ विनोद भण्डारी
विराटनगर — बजारमा खपत भएका सिलिन्डर खाली भएर उद्योगमा नपुग्दा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालमा अक्सिजन अभाव सुरु भएको छ । पर्याप्त अक्सिजन उपलब्ध नहुँदा उपचारमा समस्या भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन् ।
यहाँको नोबेल र विराट शिक्षण अस्पतालले संक्रमितको उपचारका लागि एक/एक सय बेड व्यवस्था गरेका छन् । सबै बेड शनिबारदेखि नै भरिएका छन् । थप बेड विस्तारका लागि आवश्यकताअनुसार अक्सिजन उपलब्ध हुन नसकेको अस्पतालको भनाइ छ ।
नोबेल शिक्षण अस्पतालका निर्देशक नारायण दाहालका अनुसार ठूलो प्लान्ट मर्मत भइरहेकाले अस्पताललाई हाल बाहिरको दैनिक ४ सय सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्छ । अहिले अस्पतालमा दैनिक बढीमा तीन सय सिलिन्डर मात्र मुस्किलले उपलब्ध हुँदै आएको छ । अस्पतालमा एक हजार ५० शय्या छ । त्यसमध्ये ४९ वटा आईसीयूसहित एक सय ४ शय्या कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएको छ । सबै शय्यामा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ ।
विराट शिक्षण अस्पताललाई पनि दैनिक कम्तीमा सय सिलिन्डर अक्सिजन अभाव भएको अस्पतालका मनिटर कासी चुडालले बताए । ‘आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छैन,’ उनले भने, ‘२५ लिटरका दुई सय सिलिन्डर अक्सिजन दैनिक रूपमा उपलब्ध हुँदा कोभिडका सय शय्यासहित अस्पतालका अन्य रोगका बरामीलाई मात्र धान्दै आएको छ ।’ उक्त अस्पतालमा कोरोनाका लागि छुट्याइएका ३४ आईसीयूसहित सय बेड भरिएका छन् । सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा मारुती, विनायक, हिमाल, पाथीभरा र दुर्गा अक्सिजन उद्योगले अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
सबै उद्योगले अन्य उद्योगलाई दिँदै आएको अक्सिजन कटौती गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गर्ने सहमति गरेका छन् । मारुती अक्सिजन प्लान्टका निर्देशक विवेक अग्रवालले बजारमा गएका सिलिन्डर खाली भएर उद्योगमा नपुग्दा समस्या भएको बताए । मारुती प्लान्टमा ४७ लिटर अक्सिजन अटाउने १ हजार ३ सय वटा सिलिन्डर रहेकामा हाल ११ सय वटा मात्र उद्योगमा रहेको उनले जानकारी दिए । दुई सय सिलिन्डर लामो समयदेखि बजारमै होल्ड भएका छन् ।
विनायक अक्सिजन प्लान्टसँग सानाठूला गरेर ८ हजार वटा सिलिन्डर छन् । यो प्लान्टले पूर्वका अधिकांश अस्पताललाई अक्सिजन उपलब्ध गर्दै आएको छ । त्यस्तै, पाथीभराले दैनिक ३ सय ५० र हिमाल अक्सिजन प्लानले दैनिक दुई सय क्युबिक मिटर अक्सिजन उत्पादन गरिरहेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ १०:५२
वैशाख २२, २०७८ विप्लव महर्जन
सल्यान — कोरोनाबाट सल्यानमा बुधबार बिहान दुई जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा बागचौर नगरपालिका–२ चिल्ढालेकी ५२ वर्षीया महिला र शारदा नगरपालिका–१ श्रीनगरका ७४ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो ।
ती महिलालाई टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने समस्या देखिएपछि मंगलबार दिउँसो जिल्ला अस्पताल सल्यान ल्याइएको थियो । उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएकी उनको उपचारकै क्रममा बुधबार बिहान करिब ८ बजे मृत्यु भएको अस्पताल प्रमुख डा. भीमकान्त जैसीले बताए । उनका अनुसार १६ गते भर्ना गरिएका शारदा नगरपालिका–१ का ७४ वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ ।
यससँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमितबाट मर्नेको संख्या ११ पुगेको छ । आठ जनाको जिल्लाभित्रै र तीन जनाको बाहिर मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
डा. जैसीका अनुसार मंगलबार प्रदेश सरकारले ११ वटा अक्सिजन सिलिन्डर पठाएपछि संक्रमितको उपचारमा केही सहज भएको छ । जिल्लामा बुधबार बिहानसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ३ सय ४६ पुगेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन रिखाराम पुनले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ १०:५१
शुक्रबार मध्यरातिदेखि मोरङमा निषेधाज्ञा
विराटनगरमा थप ७ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
उदयपुरमा वैशाख ३१ गतेसम्म थपियो निषेधाज्ञा
भारतबाट सीधै घर
संखुवासभामा व्यवसाय वैशाख मसान्तसम्म बन्द
बिर्तामोडमा ५० बेडको आइसोलेसन